गफ ! .....: July 2008
Posted by दीपक जडित at 4:46 AM9comments: Links to this post
साना जुर्मुराए परिवर्तन ल्याए मौका उछिटे ठुलाले ।
न रंग छ न छ कुनै ढंग भनि सानालाई सिटे ठुलाले ।
साना झुकेनन् निहुरिएनन् शिर ठाडो गरेर उठिरहे ,
पख्लास ए ! तलाईँ भनेर कड्कीएर दाह्रा किटे ठुलाले ।
शुरु भो खेल सुकिला मैला बिच , खुल्लमखुल्ला बजारमा ,
रेखा विभाजनको मेटिनेछ भन्थे , दलित पिटे ठुलाले ।
नयाँ आकासमा स्वतन्त्र श्वास फेर्ने सानाको चाहनालाई ,
बन्द , हड्ताल र जुलुस् बनाई सडकमा घसिटे ठुलाले ।
भागबण्डा कुर्शीको लगाए उनैले र माथी बस्ने को भन्दै ,
म्यारिज बनाई परिवर्तनलाई तासमा फिटे ठुलाले ।
भन्दैथिए जलाउंछौं शान्तीको 'दीपक' घरघर सर्बत्र ,
केहि अगाडी लेखेको यो गजल पनि ड्राफ्टमा बसेको थियो आज राख्दैछु ब्लगमा ।
Posted by दीपक जडित at 3:37 PM No comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 4:42 AM5comments: Links to this post
एक्कासी अहो ! आज तिम्रो ख्याल आयो ।
यादमा तिमी सिँगारिने झ्याल आयो ।
लुक्यो कि अजंग सिँह म भित्रबाट ,
सामुन्नेमा फटाहा लोभि स्याल आयो ।
कटाक्ष जो देखें तिम्रो ऐना अगाडी ,
हरे ! मेरो त लौ मुखैमा र्‍याल आयो ।
तड्पीयौ कि त तिमी पनि विरहले ,
र तिम्रो याद यस्तरी छ्याल्ब्याल आयो ।
एक्लिएर 'दीपक' पग्लिँदा तापमा ,
त्यसो त नेपाली गजल ग्रुपमा मैले राखे मध्ये धेरै गजलहरु दोषपुर्ण देखिएका छन् तरपनि मैले लेख्न छाडेको छैन र त्यही क्रमलाई जोड्दै यो यौटा गजल भर्खरै तयार भएको राखेको छु ।
Posted by दीपक जडित at 4:02 PM3comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 5:53 AM3comments: Links to this post
मर्म लेखेर गजलमा पियारी शेर शेरमा रुवायौ ।
मतला देखि मक्तासम्मै एक एक 'अक्षेर'मा रुवायौ ।
हिसाब दुरुस्त निकाली देखायौ माया कति गरेका थ्यौं ,
रुवायौ मलाई आँखिर पियारी थोरधेरमा रुवायौ ।
चर्चा बटुल्यो तिम्रो गजलले सुन्छु बजेको जहिंतहीँ ,
पूजाआजा , बिहेबटुलो अनि भोजभतेरमा रुवायौ ।
आत्मग्लानिले गलेर फत्तक्कै हररात आँखैमा बित्छ ,
सक्दिनं म श्वास फेर्न दिनमा , साँझसबेरमा रुवायौ ।
दुरी भुगोलको टाढा हुँदा नि गजलले आएर छोई ,
आँखिर पियारी 'दिपे'लाई घोप्ट्याई 'पएर'मा रुवायौ ।
म जिउँदै छु - मरिगा'को छैन भनेर त कम् से कम् साथीभाईलाई जानकारी दिनैपर्ने भयो भनेर यो पुरानो ( धेरै पुरानो पनि हैन ) गजल राख्दैछु । अझैपनि मलाई ब्लगमा नियमित देखापर्न गोडा दुई एक दिन लाग्न सक्ला । यो बिचमा मलाई खै गर्नुभएकोमा दिलीपजीलाई पुन एक पटक धन्यवाद भन्दैछु ।
Posted by दीपक जडित at 6:29 PM3comments: Links to this post
म आज साँझ ५ . ५५ मा माउईबाट हवाईयन एयरलाईन्स चढेर अधाघण्टा पछि ओहावो ( होनोलुलु ) झर्दैछु र त्याँहाबाट रात ९ . १५ मा अलास्का एयरलाईन्स चढेर अलास्का ( एँकरेज ) को लागी उड्दैछु । भोली बिहान ५ . १५ मा म त्याँहा पुग्नेछु । हवाईसंगको निकटतालाई अब म सम्झनामा लपेटेर लाँदैछु भने अलास्कासंग नयाँ सम्बन्ध जोड्न गै रहेछु ।
यतिखेर मलाई 'समय नै ईश्वर हो समयले हिँडाउंछ' भन्ने गीत याद आईरहेछ भलै म समयले हिंडाएर हैन आफ्नै रहरले ( अलास्का हेर्ने ) त्याँहा जाँदैछु । हवाईको विदाईमा निकै लामो गरेर लेख लेखुँला भन्ने थियो मनमा तर यतिखेर म धेरै केहि लेख्न सकिरहेको छैन । अलास्का पुग्ने उत्तेजना र हवाई छोड्ने खल्लोपनाको संमिश्रणले न्युट्रलमा बसेझैं महसुस भैरहेछ । हवाई छाडेपछि सबैभन्दा धेरै म यहि सुन्दर समुन्द्र किनारलाई सम्झनेछु । यहि किनारसंग मेरो गहिरो आत्मियता गाँसिएको थियो ।
Posted by दीपक जडित at 4:34 PM6comments: Links to this post
धेरै दिन भैसक्यो केहि नलेखेको आज त लेख्छु भनेको लेख्न लागेको कुरा अधुरै छ । त्यसैले केहि अगाडी ड्राफ्टमा राखेको यो गजललाई नै यहाँ राख्दैछु ।
उमेर औंलासंगै पितृको भाँची राख ।
हाईसञ्चो हुनेभो भनेर नाची राख ।
बाँचुञ्जेल पितृसेवा नगर्दा नि भयो ,
काजक्रियामा त गरें भन्न साक्षीराख ।
दुखसागरमै रहे छउञ्जेल जिउ ,
तराउ बैतरणी गाईको बाछी राख ।
खाली खुट्टा , आधाजिउले जुनी बिताए ,
वस्त्रदानमा सृजन्तैसंग काछी राख ।
बनाउ एक चौतारो दोबाटो खोजेर ,
सम्झनामा वरपिपलको गाछी राख ।
रहिनन लौ बुहारी अब प्रिय तिम्री ,
फेरेर नाउँ मन्दाकिनी , मिनाक्षी राख ।
रहेन बुहार्तन् अब तिम्री प्रियलाई ,
मैले मक्तालाई सक्दो सच्याएको छु , अब हुन्छ कि ?
Posted by दीपक जडित at 5:01 PM 8 comments: Links to this post